scheduleशुक्रवार चैत्र २८ गते, २०७६
स्वामी विवेकानन्द एकदिन आफ्नै आश्रममा बसिरहेका थिए । त्यसैबेला एक व्यक्ति अत्यन्तै दु:खित् मुद्रामा उनको आश्रममा आइपुग्यो । अनि उनको पाउ समातेर भन्न थाल्यो, ‘स्वामीजी मैले आफ्नो जीवनसँग हार खाइसकेँ । हरेक दिन निकै मेहनत गर्छु, तर पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । भगवानले मलाई मात्र किन ठगेका ? पढेलेखेको छु, मेहनत पनि गर्छु, तर सफल हुन सक्दिन ।’
विवेकानन्दले ति व्यक्तिको समस्या बुझे, अनि आफ्नो आश्रममा पालिएको कुकुरतर्फ देखाउँदै उसलाई भने, ‘जाऊ मेरो यो कुकुरलाई निकै परसम्म घुमाएर ल्याऊ, त्यसपछि मात्र म तिमीलाई जवाफ दिन्छु ।’
विवेकानन्दले यसो भनेपछि सो व्यक्ति अचम्मित भयो; तै पनि स्वामीजीको आग्रह नमान्ने कुरा भएन, कुकुर फुकाएर डुलाउन हिँड्यो । करिब आधा घण्टापछि कुकुर लिएर ऊ आश्रममा फर्कियो । फर्किँदा सो व्यक्तिमा थकानको कुनै पनि संकेत थिएन, तर कुकुर भने थाकेर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा थियो ।
त्यसपछि विवेकानन्दले सोधे, ‘यो कुकुर किन यति धेरै थाक्यो ? जबकी तिमी त थकित देखिँदैनौ !’
उसले जवाफ दियो, ‘स्वामीजी म सिधा आफ्नो गन्तव्यमा केन्द्रित थिएँ, तर यो कुकुर भने गल्लीमा जब अन्य कुकुरहरु देख्थ्यो, तब भुक्दै तिनीहरुको पछि-पछि दगुर्थ्यो, अनि फेरि कुदेर नै आफ्नो बाटोमा आउँथ्यो । यसले बाटोमा जति पनि कुकुर भेट्यो ति सबैको पछि-पछि दगुर्‍यो; सायद त्यही भएर यो यति धेरै थकित छ । तर म भने सिधा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेँ, त्यसैले थाकेको छैन ।’
त्यसपछि विवेकानन्दले जवाफ दिए, ‘तिम्रो सबै प्रश्नको जवाफ यही हो । सफलता तिम्रो वरीपरी नै छ । तर तिमी सिधै गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नुको साटो यही कुकुरले जस्तै दुनियाँको पछि-पछि भाग्दैछौ । दुनियाँले के भन्छन्, के गर्छन्, यी कुरामा आजैबाट चासो दिन छाडिदेऊ । सफलता छिट्टै तिम्रो पोल्टामा हुनेछ ।’
सन्देश: यही कुरा लगभग हामी सबैको जीवनमा लागु हुन्छ । हामी अधिकांश दुनियाँको पछि भाग्छौँ । कसले के भन्छ, के गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई बढी चासो हुन्छ । यस्तै कुरामा चासो दिएर हामीले आफ्नो बहुमूल्य समय र शक्ति खर्चिरहेका छौँ । त्यसैले जिन्दगीभर संघर्ष गर्न बाध्य छौँ । त्यसैले दुनियाँलाई चासो दिन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न छाडिदिनुस् । आफ्नो लक्ष्य अरुलाई हेरेर होइन, आफैँ तय गर्नुपर्छ ।
यसकारण अत्यावश्यक छ कपल काउन्सलिङ
विश्वभर कोरोना भाइरस: यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
काठमाडौँ, २८ चैत । विश्वभर कोरोना भाइरसको कहर रहेको छ । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या...
भारतमा कोरोना भाइरस: कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
काठमाडौँ, २८ चैत । भारतमा कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ । विहीबारमात्रै कोरोना भाइरसका कारण ४८ जनाको मृत्यु भएको छ ।...